You are at:Home»Program»Thayninga Strategic Review (TSR)
By ThayNinGa on	 February 1, 2020 Program
ပွောငျးလဲတိုးတကျနသေော မဟာဗြူဟာနှငျ့ နညျးပညာမြားဆိုငျရာ ဆှေးနှေးရနျအတှကျ သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့က “Thayninga Strategic Review” အစီအစဉျအား တဈလလြှငျ တဈကွိမျ လတဈလ​၏ ပထမပတျ စနနေေ့၌ ပွုလုပျရနျ စီစဉျထားပါသညျ။ လူငယျပညာရှငျမြားနှငျ့ လလေ့ာသူမြားအတှကျ ဦးတညျထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။
Thayninga Strategic Review Serial No. (1/2020) အား ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဖဖေျောဝါရီ (၁) ရကျနေ့ (စနနေ့ေ့) တှငျ သနေင်ျဂအဖှဲ့ရုံး၌ ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။ q
ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော မဟာဗျူဟာနှင့် နည်းပညာများဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးရန်အတွက် သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့က “Thayninga Strategic Review” အစီအစဉ်အား တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် လတစ်လ​၏ ပထမပတ် စနေနေ့၌ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ လူငယ်ပညာရှင်များနှင့် လေ့လာသူများအတွက် ဦးတည်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Thayninga Strategic Review Serial No. (1/2020) အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့ (စနေ့နေ့) တွင် သေနင်္ဂအဖွဲ့ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Thayninga Strategic Review (TSR) by Thayninga Institute for Strategic Studies was held in February 1, 2020.